Izizathu ezi-3 zokuLandisa ukuThengisa ngokuFikelela kwiVidiyo | Martech Zone
Ividiyo sesinye sezixhobo zokuthengisa ezinamandla kwi-arsenal yakho yokwandisa ukufikelela kwintengiso, kodwa ihlala ihoywa, isetyenziswa kakubi kunye / okanye ingaqondwa kakuhle.
Akukho mbuzo wokuba imveliso yemixholo yevidiyo iyoyikisa. Izixhobo zingabiza kakhulu; Inkqubo yokuhlela edla ixesha, kunye nokufumana ukuzithemba phambi kwekhamera akusoloko kuza lula. Ngombulelo sinezinto ezininzi ezikhoyo namhlanje zokunceda ukoyisa le mingeni. Iifowuni ezintsha ze-smartphones zibonelela ngevidiyo ye-4K, isoftware yokuhlela sele ifikeleleka kwaye kulula ukuyisebenzisa, kwaye unokuziqhelanisa nezakhono zekhamera kwiinethiwekhi zentlalo ezinjengeFacebook ebukhoma, iSnapchat, kunye nePeriscope.
Ngaba kufanelekile ukuba ubeke ixesha ukoyisa le mingeni, kwaye ividiyo inokunceda njani ukwandisa ukufikelela kwakho kwintengiso?
Abasebenzisi beSelfowuni bayathanda kwaye babelane ngeeNtengiso zeVidiyo!
Xa umthengi wanamhlanje efuna ukufunda ngakumbi malunga nento abanqwenela ukuba nethuku yabo yokuqala kukufikelela kwi-smartphone ukufumana ezo mfuno zifezekisiwe. Uphando lukaGoogle ibonisa ukuba abasebenzisi be-smartphone abajonga iividiyo kwizixhobo zabo banokubakho kwi-1.4x ukubukela iintengiso emva koko ezo zikwiidesktops, kwaye kwane-1.8x kunokwenzeka ukuba yabelwe.
UGoogle uthanda ividiyo!
Umxholo wakho 53x ngakumbi ukubonisa kuqala kwiphepha leziphumo ze-injini yokukhangela yeGoogle ukuba unayo ividiyo efakwe kwiphepha lakho lewebhusayithi. Esi sesona sizathu ICicsco iqikelela le vidiyo iya kwenza i-69% yabo bonke abathengi be-Intanethi ngo-2017.
IVidiyo iguqula amathemba ngakumbi abaThengi!
Ividiyo elula kwiphepha lokufika linakho Yongeza ukuguqulwa ngama-80%. Ukuba usebenzisa ividiyo kwi-imeyile, ungalonyusa izinga lokuguqula ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-300. Kuthekani ngeB2B? I-50% yabaphathi ijonge ulwazi oluthe kratya emva kokubona imveliso / inkonzo kwividiyo, i-65% ityelele iwebhusayithi, kwaye i-39% yenze umnxeba.
Ndingaqhubeka, kodwa okwangoku ezi zizathu zilula ze-3 kufuneka zanele ukonwaba malunga nendlela onokuthi wandise ukufikelela kwintengiso ngevidiyo. Ithemba liya kuthi libukele umxholo wakho, uGoogle uya kwenza umxholo wakho ube yinto ephambili, kwaye ividiyo iya kuguqula umxholo wakho ube ziidola.
tags: IiVidiyo zeNtengisoukuthengisa ividiyoizibonelelo zentengiso yevidiyo
Ngomhla wama-21 ku-Disemba 2016 ngo-9: 56 AM
Molo Harrison, ndiyavuma nawe.
Ividiyo ngumxholo olandelayo wohlobo. Ividiyo inokunika amava angcono omsebenzisi xa kuthelekiswa nayo yonke enye indlela. Kutshanje ndize umnqamlezo kwinqaku eliqaqambisa ukubaluleka kwevidiyo ekomelezeni uguquko. Umbhali weForbes uJayson DeMers ukhankanye kwelinye inqaku lakhe ukuba ikamva ngumxholo wevidiyo. Kananjalo isifundo esenziwe yiCisco sixele kwangaphambili ukuba, nge-2018 i-79% yezithuthi ze-intanethi ziya kuza zivela kwiintengiso zevidiyo. Kwimpendulo yakho, Chick eli nqaku elalatha ukubaluleka kwevidiyo http://www.kamkash.com/top-8-online-marketing-strategies/